गोरो लामो सीधा कपाल शर्मिला हंसमुख 164CM यथार्थवादी आइरनटेक सेक्स डल डकोटा
डकोटा 164CM गोरा लामो सीधा कपाल ई-कप आइरनटेक शर्मिला हंसमुख TPE सेक्स डल
डकोटा पृष्ठभूमि कथा:
Dakota 164cm को उचाइ भएको TPE यौन पुतली हो। मानिसहरू अक्सर सोच्छन् कि उपस्थिति वा लिङ्गमा आधारित सम्बन्ध सतही, सतही, र असफल हुन बर्बाद हुन्छ। उनी विश्वास गर्छिन् कि झगडा र खराब कामहरू हरेक स्थायी सफल सम्बन्धको आधारशिला हुन्। यस कारणका लागि, उनी वास्तवमै एक ओलम्पिक लीभर प्रदर्शनकर्ता हुन् जसको निद्रामा कन्टोर्शनिस्ट शरीर छ। यद्यपि संभोग साँच्चै महत्त्वपूर्ण छ, सेक्स डलहरू पनि सुन्नमा विश्वास गर्छन्। हरेक घनिष्ठ क्षणको कदर गर्नुहोस्, तर बोल्नुहोस् र सुन्नुहोस्। तपाईंको राजनैतिक वा धार्मिक विश्वासको बाबजुद, सेक्स डलहरूले तपाईंलाई न्याय गर्दैनन्। यद्यपि, यदि तपाईंले "डम्बलडोर समलिङ्गी हो" भन्नुभयो भने, उनको आँखा स्वतः खस्नेछ र दुई विषालु डार्टहरू तपाईंलाई हिर्काउनेछन्। प्रेम र युद्धमा, सबै कुरा जायज हुँदैन। के तपाईंसँग अँध्यारो पक्ष छ र तपाईंका पुर्खाहरूको चिहानमा साहसिक र रोमान्टिक यात्राको आनन्द लिनुहुन्छ? आफ्नो सेक्स डल सँगै तान्दा किन एक्लै जानुपर्छ ? आफ्नो मनपर्ने कालो लुगा लगाउनुहोस् र आफ्नो स्थानीय क्षेत्र नजिकैको चिहानमा जानुहोस्। यदि तपाईं इजिप्टमा हुनुहुन्छ भने, पिरामिडहरूमा जानुहोस्। जब सम्म तपाईको सिलिकन प्रेमिका हिड्न सक्ने रोबोट मोडेल मध्ये एक होईन, तपाईले उसलाई उसको पछाडि बोक्नुपर्ने हुन सक्छ। केही रोटी र खाजाहरू प्याक गर्नुहोस्, त्यसपछि यौन पुतलीलाई केही पेस्टो र मासुको चटनीले छोप्नुहोस्, उसलाई आफ्नो काँधमा फाल्नुहोस्, र कब्रिस्तानमा प्रत्येक वृद्ध महिलालाई डराउनुहोस् जब तपाईं राम्रो ठाउँ खोज्दै हुनुहुन्छ।
जोआना 166CM मिस सकर ई-कप आइरनटेक कोमल शान्त TPE सेक्स डोल ...
जोआना पृष्ठभूमि कथा: जोआना 166 सेन्टीमिटरको उचाइको TPE सेक्स पुतली हो। यसले सेक्स र साथीको लागि डिजाइन गरिएका यी अद्भुत खुशी पुतलीहरूको बढ्दो लोकप्रियता र विश्वव्यापी प्रशंसाको व्याख्या गर्न सक्छ। यौन पुतलीहरू मात्र नियमित रूपमा सफा गर्न र प्रयोगहरू बीच ठीकसँग भण्डारण गर्न आवश्यक छ। यदि तपाइँ cl गर्न बिर्सनुभयो भने ...
Alivia Irontech कांस्य सानो गधा TPE सेक्स पुतली
Alivia पृष्ठभूमि कथा: Alivia एक TPE यौन पुतली हो। यस क्षेत्रमा धेरै सेक्स खेलौनाहरू भन्दा फरक, यथार्थवादी मानवीय सेक्स पुतलीहरू Fleshlight-प्रकार एकल हस्तमैथुनलाई अमानवीय बनाउनुको सट्टा अनुभवलाई मानवीकरण गर्ने बारे हुन्। यी प्रेम पुतलीहरू हामीले यौन अनुभवको नक्कल गर्न आविष्कार गरेका सबैभन्दा नजिकको चीज हुन् ...
Rebecca 161 CM F-Cup Irontech Sad Young Woman ठूलो गोरा स्तनहरू ...
रेबेका पृष्ठभूमि कथा: रेबेका 161 सेन्टिमिटरको उचाइको TPE सेक्स डल हो। जब तपाईं आफ्नो सानो सिलिकन स्लेभ सेक्स डलमा प्रवेश गर्दा डबल चीजबर्गर र चिसो एक खान सक्नुहुन्छ, तपाईंले महँगो उच्च-अन्तको फ्रान्सेली रेस्टुरेन्टहरू गडबड गर्न सक्नुहुन्छ। यो उसले छोड्छ कि भन्ने प्रश्न होइन, तर प्रश्न ...
Alayna 158CM I-Cup Irontech राम्रो नितंब सुन्दर स्तन TPE ...
Alayna पृष्ठभूमि कथा: Alayna 158cm को उचाइ संग TPE सेक्स पुतली छ। यदि खुट्टाहरू सँगै ल्याइयो भने, यौन पुतली वास्तविक महिला भन्दा बलियो हुनेछ, जसले व्यायामलाई सजिलो र लामो समयसम्म चलाउँछ। हस्तमैथुनको तुलनामा, तपाइँ कति लामो समयसम्म टिक्न सक्नुहुन्छ र तपाइँ कहिले...
ट्रिनिटी 160CM एच-कप आइरनटेक सिलिकॉन हेड सरल पन्जेन्ट सिलिको ...
ट्रिनिटी पृष्ठभूमि कथा: ट्रिनिटी 160 सेमी उचाइको एक सिलिकोन सेक्स पुतली हो। जब तिनीहरू अलग भए, बिलीले भने, "हे भगवान, यो महान छ।" "हो," उनले शान्तपूर्वक जवाफ दिइन्, आफ्ना हातहरू माथि र तल उनको काखमा सार्दै। उनले उसको देब्रे हात समातिन्, उसलाई ओछ्यानमा तानेर सुतिन्। बिली कहिल्यै देखा परेको थिएन ...
क्यामिल 164 सीएम ई-कप आइरनटेक छोटो स्कर्ट प्रलोभन राम्रो बुटक ...
Camille पृष्ठभूमि कथा: Camille 164 cm को उचाइ भएको TPE सेक्स पुतली हो। यद्यपि धेरै मानिसहरूले विरोध गरे पनि, सेक्स डलहरू अझै पनि यौन स्वास्थ्य उत्पादनको रूपमा धेरै शक्तिशाली छन्। विश्वव्यापी महामारीले हाम्रो यौन जीवनलाई असर गर्ने क्रममा, यस प्रकारको यौन सन्तुष्टि प्रदान गर्ने उत्पादनहरू बढ्दै गएको छ ...
क्याथरीन 164CM डिप्रेस्ड ई-कप आइरनटेक नम्बर 101 कालो छाला ठूलो ...
क्याथरिन पृष्ठभूमि कथा: क्याथरिन 164 सेमी उचाइको TPE सेक्स पुतली हो। तपाईंलाई थाहा छ, मलाई थाहा छ, तपाईंको महिला जतिसुकै राम्रो भए पनि, यो नाटकीय हुनेछ। यो केवल समय, समय, वा गम्भीरता को कुरा हो। अनुभवले तपाईंलाई यसको विरुद्धमा बलियो बनाउन सक्छ, तर तपाईंले कुनै पनि पुन: प्राप्त गर्न धेरै सहनु पर्छ ...
Lena 158CM सेतो कपाल ठूला स्तनहरू भएको I-Cup Irontech No. 91 Hea...
Lena पृष्ठभूमि कथा: Lena 158cm को उचाइ भएको TPE सेक्स डल हो। सेक्स डलहरू यति उत्कृष्ट छन् कि केहि मानिसहरूले वास्तवमा आफ्नो सेक्स डलसँग विवाह गर्छन्। हालैका वर्षहरूमा, युरी टोलोच्को, एक कजाख जसले आफूलाई प्यानसेक्सुअल भएको दाबी गर्छन्, बारम्बार हेडलाइन्स बनेका छन्। जब उनको डेरा पछि उनले मार्गोटसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेको खबर फैलियो ...
Paige 158CM I-Cup Irontech No. 102 Sexy Big Breasts Virtuous Nau...
Paige पृष्ठभूमि कथा: Paige 158cm को उचाइ संग TPE सेक्स पुतली छ। महिलाहरु सम्बन्ध सम्बन्धित समस्याहरु (सेक्स पुतली को तुलना मा) को बारे मा पागल हुन को लागी हुन्छ। पारस्परिक सम्बन्धहरूमा अति सोचाइ सामान्य छ, जसमा साधारण कार्यहरू जुन जानाजानी नहुन सक्छ वास्तवमा पुन: को भाग्य निर्धारण गर्दछ।
मारियाना १५९ सीएम ई-कप आइरनटेक नम्बर ८९ बोल्ड इन्ट्रोभर्टेड डेलिकेट टीपी...
मारियाना पृष्ठभूमि कथा: मारियाना 159 सेन्टिमिटरको उचाइको TPE सेक्स डल हो। सौभाग्यवश, बजारमा धेरै विकल्पहरूको साथ, सबैले आफ्नो सपनाको पुतली फेला पार्न सक्छन्। के कारणले एशियाली सेक्स डलहरू विश्वभरका पुरुषहरूमाझ लोकप्रिय बनाउँछ? सायद यो यसको अद्वितीय निर्दोष तर सेक्सी अनुहार सुविधाहरू हो। वा हुनसक्छ यो...